Global Voices teny Malagasy » Ozbekistana: Ireo Fiovàna Tsy Niriana · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 15 Avrily 2019 11:57 GMT 1	 · Mpanoratra Tolkun Nandika Sylvia Aimée
Sokajy: Azia Afovoany sy Kaokazy, Ozbekistan, Fampandrosoana, Fitantanam-pitondrana, Fiteny, Mediam-bahoaka, Politika
Taorian'ny faharavàn'ny URSS , nitsahatra tsy nisy intsony ny mari-pamantarana sy ny ideolojia kaominista sovietika ary niatrika olana miezinezina momba ny famaritana maripamantarana azy vaovao sy ara-ideolojika ireo firenena vaovao. Vetivety dia leo ny lasany ny ankamaroan'ireo firenena tao amin'ny Firaisana Sovietika taloha ary nanaiky ny fiainam-baovao miaraka amin'ireo soatoavina sy hevitra nasionaly vaovao. I Ozbekistana no iray amin'ireo firenena tsy fahita firy izay nandeha tamin'ny fomba tena nalaky ny fizotran'ny famaritana ny maha-izy azy vaovao sy ny famaritana ny soatoavina nasionaly vaovao.
Milaza ny Provincialka ao amin'ny neweurasia  fa nandalo  fanovàna goavana i Ozbekistana taorian'ny firodanan'ny Firaisana Sovietika, ary manoratra izy fa ny governemanta vaovao Ozbeky entin'ilay Silamo Karimov dia nampiditra andro vaovao tsy fiasana nefa andraisana karama ho ao anaty tetiandron'ny firenena ary nanova tanteraka an'ireo izay efa nankalazaina tamin'ny vanim-potoana Sovietika.
Arahabain'i Musafirbek ao amin'ny neweurasia  ny rehetra, noho ny Andron'ny Fandresena ary ambarany  fa “tsy olana na inona na inona iantsoana an'io andro io any amin'ireo firenena samihafa, ny tsy azo lavina dia vokatry ny firaisankina, ny finamanana ary ny herimpon'ireo firenena samihafa io fandresena io” [teny rosiana].
Tsy ny anaran'ireo fety sy arabe ihany no novàn'ny governemanta vaovao, fa nesorina ihany koa ireo tsangambato tranainy. Iray tamin'ireo tranga ireo ny fandravàna tanteraka  ny iray tamin'ireo fahatsiarovana tena nohajaina fatratra tao Tachkent – ilay tsangambato iraisam-pirenena ho an'ny finamànana. Najoro izy io ho fahatsiarovana ireo Shamakhmudovs, izay niahy an'ireo zaza kamboty 15 nandritra ny Ady Lehibe Faharoa ary nanjary marika famantarana ny fahalalahan-tanana sy ny maha-olombelona ny vahoaka Ozbeky.
Niteraka fanehoankevitra  marobe ny lahatsoratry ny Fergana.ru , izay toerana nifampizaràn'ireo mpamaky ny hevitr'izy ireo mikasika ny fandravana ilay tsangambato. Milaza i Emigrant hoe:
Ny fikisahan'ny alfabeta Ozbeky niala tamin'ny sirilika hankamin'ny teny latina no fanovàna iray hafa natrehin'ny firenena, taorian'ny firodanana ny Firaisana Sovietika. Nitondra lafy ratsiny  marobe ho an'ny firenena Ozbeky io fanovàna io, nahita fahasahiranana tamin'ny famakiana alfabeta latina ny andian-taranaka taloha. Raha toa ny fampahalalam-baovao an-tsoratra mijanona ho amin'ny teny sirilika, ireo hira, ireo sora-baventy sy ireo dokambarotra eny an-dalambe kosa lasa amin'ny teny latina. Asehon'ireo fivoaran-draharaha vao haingana ao amin'ny firenena fa, ankehitriny, mamadika ny teny rosiana ho amin'ny alfabeta latina ny olona ! Ny blaogy RealUzbekistan  hatreto no voalohany manaitra  an'io olana io eny anatin”ireo media.
Nalefa ihany koa teo amin'ny neweurasia .
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2019/04/15/136846/
 ny fandravàna tanteraka: http://enews.ferghana.ru/article.php?id=2361&PHPSESSID=b6cfff87f4854a2441d716b25e2ad722
 lafy ratsiny: http://tolkun-umaraliev.blogspot.com/2007/07/problems-with-uzbek-latin-alphabet.html